Snake Game နောက်ပြန်လှည့်ပါ Androidsis
Snake Game, မြွေဂိမ်းအဟောင်းသည်ယခင်ကထက်အသစ်ပြန်စသည့် Play Store သို့ပြန်လာလိမ့်မည်
အကယ်၍ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်တရများတွင်ထာဝရတည်ရှိနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ထိုဂိမ်းများတွင်စံအဖြစ်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ခေတ်မှီသောဂိမ်းဖြစ်လာသည်မှာသေချာသည်။ ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ Nokia ၏ပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းများ။ ဒီဂိမ်းကသင်ထင်ထားသလိုပါပဲ၊ လူကြိုက်များသည် မွှေ သို့မဟုတ်ပိုကောင်းလူအပေါင်းတို့အားလူသိများ "မြွေဂိမ်း".
ကောင်းပြီ၊ ငါမှတ်ချက်ပေးမည့်သတင်းမှာဂိမ်း၏မူလတီထွင်သူဖြစ်သည် မြွေဂိမ်းတစ်အချို့ Taneli armanto, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူနှင့်တွဲဖက်။ Rumilos ဒီဇိုင်း, ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်စေပြီ မြွေဂိမ်း၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြန့်ချိဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှတစ်ဆင့်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးဖြင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်ဂရပ်ဖစ်အသစ်များနှင့်အတူခေတ်နှင့်အညီလိုက်ဖက်သည်။
လွမ်းဆွတ်မှု application ကိုစတင်ခြင်းသည်မူအရနှင့်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းအတွက်စီစဉ်ထားသည် လာမည့်မေလ 14 ရက်ဖက်ရှင်ရွေးစရာများပါ ၀ င်သော်လည်းအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည့် application တစ်ခု app ကိုဝယ်ယူမှု၌တည်၏ တိုးတက်မှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ဖွင့်ရန်သော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း၏တည်ဆောက်သူ (များ) သည်ဘယ်သောအခါမျှထိခိုက်နစ်နာစေမည့်ငွေအနည်းငယ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဒီမြွေဂိမ်းကိုပြန်ပေါ်လာဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နာမည်ဟာလက်အိတ်တစ်လုံးလိုဖြစ်လာတယ်၊ ဒါကမေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူနိုင်လိမ့်မယ် မြွေလှုပ် Nokia သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြင့်လိုက်နာရမည့်စံနမူနာဖြစ်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်နှစ်များကိုပြန်လည်ခံစားနိုင်ရန်ပြန်လည်ပတ်လာသည်။
ဒီပါဝင်လိမ့်မည်ဟုသောအသစ်အဆန်းများထဲတွင် အသစ်သောတိုးတက်လာသောနှင့် Snake ဂိမ်း၏ဗားရှင်းအောက်ပါရှုထောင့်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
ဂရပ်ဖစ်လက်ရှိခေတ်မှ updated ။
မြွေနှင့်တိုက်မိပြီးနောက်အချိန်ပြန်သွားဖို့ Option ကို။ (၎င်းသည်ယုတ္တိနည်းကျအသုံးပြုရန်အချိန်အကန့်အသတ်ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုရရှိသောဒင်္ဂါးများမှတဆင့်သို့မဟုတ် In-app ပေးငွေများမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ).
သစ်သီးဆိုင်။ ဤစတိုးဆိုင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းထားသည့်အသီးများကိုညှိနှိုင်း။ အသားဖြင့် အသုံးပြု၍ သီးသန့်အဆင့်အသစ်များကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပိုမိုမြန်ဆန်သောတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်လိုပါက ၀ ယ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံ။
ဒီကနေ Androidsis ပါ သင်တို့အားလုံးကိုအချိန်မီအသိပေးခြင်းအပြင်ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုပြောကြားရန်၎င်း၏တရားဝင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိမ့်မည်။ မိုဘိုင်းဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုခေတ်ကိုမှတ်သားသောဂိမ်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Snake Game, မြွေဂိမ်းအဟောင်းသည်ယခင်ကထက်အသစ်ပြန်စသည့် Play Store သို့ပြန်လာလိမ့်မည်
ဒဏ္myာရီမြွေကိုတုပသည့် Android ဂိမ်းများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။ သတင်းကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး
သေးငယ်သောအရာသည်အသစ်မဟုတ်ပါ၊ Rewind ကိုမူရင်းဖန်တီးသူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ပြုလုပ်ထားသည်။
Samsung Galaxy Note5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလအသစ်များ
WhatsApp မှ mp3 ဖိုင်များပေးပို့နည်း